အမေရိကန်စစ်ကျန်ဗုံးများက ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်ကို ခြိမ်းခြောက်နေဆဲဖြစ် - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ Chaktomuk မြစ်ကမ်းဘေးတွင် စစ်ကျန်ဗုံးတစ်လုံးအား ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေ ၅ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင် ၊ မေ ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ရာစုနှစ် ထက်ဝက်ကြာသည့်တိုင်အောင် စစ်ကျန် အမေရိကန်လေကြောင်းဗုံးဆံများသည် ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူများ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ခြိမ်းခြောက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယား ပညာရှင်တစ်ဉီးက မေ ၇ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ကမ္ဘောဒီးယားမိုင်းလှုပ်ရှားမှုစင်တာ(CMAC) ၏ ဗုံးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုသည် ဖနွမ်းပင်မြို့တော်ရှိ ဘုရင့်နန်းတော်၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် တည်ရှိသော Sokha Phnom Penh ဟိုတယ်အနီး Chaktomuk မြစ်ကမ်းပါး၌ အလေးချိန် ပေါင် ၂,၀၀၀ နှင့် အကြမ်းအားဖြင့် ပေါက်ကွဲမှုအား ပေါင် ၁,၀၀၀ ရှိသည့် မပေါက်ကွဲသေးသော အမေရိကန်လုပ် AN-M66 လေကြောင်းဗုံးတစ်လုံးကို မေ ၅ ရက်တွင် အသက်မဲ့ဘေးကင်းအောင် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သော ဧပြီလ တစ်လတည်းတွင် Kandal ပြည်နယ် ၊ Svay Rieng ပြည်နယ် ၊ Takeo ပြည်နယ် နှင့် Prey Veng ပြည်နယ်တို့တွင် ဗုံးတစ်လုံးလျှင် အလေးချိန် ပေါင် ၅၀၀ ခန့်စီရှိသည့် မပေါက်ကွဲသေးသော အမေရိကန်လုပ် အနည်းဆုံး Mark 82 (Mk 82) လေကြောင်း ဗုံး ငါးလုံးကို ကမ္ဘောဒီးယားမိုင်းလှုပ်ရှားမှုစင်တာ(CMAC) က ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးခဲ့ရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ Kanda ပြည်နယ် မဲခေါင် မြစ်ကမ်းဘေးတွင် စစ်ကျန် Mark 82 (Mk 82) ဗုံးတစ်လုံးအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေ ၂၁ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင်မြို့ရှိ BELTEI နိုင်ငံတကာသက္ကသိုလ်မှ အကြီးတန်းပါမောက္ခ Joseph Matthews က လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၅၀ က အမေရိကန်-ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲ၏ ဆိုးမွေများဖြစ်သော အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ မပေါက်ကွဲ သေးသည့် ဗုံးဆံများနှင့် မြေမြှုပ်မိုင်းဒဏ်ကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက ဆက်လက်ခံစားနေရကြောင်း ဆိုသည်။
“ နေ့တိုင်းပါပဲ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့ အချို့နေရာတွေမှာ ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေဟာ မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ စစ်အကြွင်းအကျန် ဗုံးဆံတွေ နဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းတွေရဲ့ သားကောင်တွေဖြစ်နေရရှာတယ်” ဟု ၎င်းက ဆင်ဟွာသတင်းဌာနသို့ပြောကြားခဲ့သည်။ “ လူ့အသက်ပေါင်းများစွာ သေကြေပျက်စီးနေရတယ်။ အဲဒီမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ ဗုံးဆံတွေေနဲ့မြေမြှုပ်မိုင်းတွေဟာ ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူမြောက်မြားစွာကို အသက်သေဆုံးခြင်း အတိဒုက္ခရောက်စေခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထိခိုက်သေဆုံးသူ အများစုသည် လယ်သမားများ ၊ အလုပ်သမားများ နှင့် ကျောင်းသားများဖြစ်ကြပြီး သူတို့သည် လယ်ကွင်းများ ၊ သစ်တောများ နှင့် စွန့်ပစ်အဆောက်အဦဟောင်းများတွင် ချထားသော မြေမြှုပ်မိုင်းများကို မတော်တဆ တက်နင်းမိရာမှ သေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ Hun Sen: Politics and Power in Khmer History for over 40 Years” ဟွန်ဆန်၏ ခမာသမိုင်းကြောင်းထဲက နိုင်ငံရေးနှင့်အာဏာ နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာ စာအုပ်ထဲတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ၁၉၆၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံထဲရှိ နေရာပေါင်း ၁၁၃,၇၁၆ ခုပေါ်သို့ ဗုံးအလုံးပေါင်း ၂၃၀,၅၁၆ လုံး ကြဲချခဲ့ကြောင်း ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းစာအုပ်ထဲတွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန်က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်က ဗုံးကြဲချခဲ့ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ “ ဒီလိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီး မကြေညာတဲ့စစ်ပွဲကြောင့် အရပ်သားပြည်သူ ထောင်ပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်” ဟူ၍လည်း အတိအလင်း ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
“ ဒီဗုံးဆံတွေနဲ့ မြေမြှုပ်မိုင်းအကြွင်းအကျန်တွေကြောင့် အသက်သေဆုံးခဲ့ရသူတွေ ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ် ချွတ်ယွင်းပျက်စီးခဲ့ရသူတွေရဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ဥပဒေကြောင်းအရဖြစ်စေ ကျင့်ဝတ်အရဖြစ်စေ လုံလောက်တဲ့လျော်ကြေးငွေပေးဖို့ နဲ့ အဲဒီလူတွေထိခိုက်ခံစားနေရတာတွေအတွက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ လူ့ကျင့်ဝတ်စံနှုန်းအရ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာ ယုံကြည်ပါတယ် ” ဟု Matthews ကဆိုသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရ၏ တရားဝင်အချက်အလက်များအရ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ မြေမြှုပ်မိုင်း နှင့် မပေါက်ကွဲသေးသည့် ဗုံးကြွင်းဗုံးကျန်များကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွင် လူပေါင်း ၁၉,၈၀၈ ဦးသေဆုံးခဲ့ရကြောင်း နှင့် အခြား လူပေါင်း ၄၅,၁၅၆ ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် အဆိုပါပညာရှင်အဖွဲ့က အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံများ၏ ပိုင်နက်နယ်မြေ နှင့်လူ့အသက်များကို လေးစားတန်ဖိုးထားရန် နှင့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီအကြောင်းပြချက်အောက်တွင် အခြားနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းရေးကို ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုရန် တိုက်တွန်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
“ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ ဒီမိုကရေစီရေး နှင့်လူအခွင့်အရေးတွေမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ စံနှုန်းနှစ်ရပ်ထား ပြုမူဆောင်ရွက်ချက်ဟာ ပြဿနာတွေကို ဖန်တီးနေရုံမျှသာမက ကမ္ဘာကြီးမှာ ပရမ်းပတာဖြစ်မှုကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း ဖျက်ဆီးရာရောက်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
“အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး ရည်မှန်းချက်ဟာ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ အတုအယောင်အရေခြုံမှု ၊ လှည့်ဖြားမှုနဲ့ အကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခ လှုံ့ဆော်မှုတွေပေါ်မှာ အခြေခံထားပါတယ် ၊ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲကစလို အီရတ်စစ်ပွဲ ၊ အာဖဂန်စစ်ပွဲထိ အဲဒီကျူးကျော်စစ်တွေဟာ ကောင်းကျိုးရလဒ်မယ်မယ်ရရ မရှိဘဲ ပိုပြီး ပရမ်းပတာဖြစ်တာ ၊ မတည်မငြိမ်ဖြစ်တာ နဲ့ ထိရှလွယ်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဟာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
စစ်အေးခေတ်စိတ်နေစိတ်ထား ၊ တစ်ဖက်သတ်ဝါဒ ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဝါဒ ၊ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးရေးဝါဒ နှင့် အလုံးစုံပျက်စီးရေးကစားပွဲများသည် အခြားသူများအား ထိခိုက်ပျက်စီးမှုကိုသာ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း Matthews က ဆိုသည်။
“ နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာအတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ၊ နှစ်ဖက်အကျိုးရလဒ်အတွက် စွမ်းဆောင်ဖို့ နဲ့ သူသာကိုယ်သာ (win-win) ရလဒ်ထွက်အောင် ပြုမူကြဖို့ပါပဲ” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
War-left U.S. aerial bombs still pose threats to Cambodian people: academic
PHNOM PENH, May9(Xinhua) — Halfacentury on, war-left U.S. aerial bombs are still posing threats to Cambodian people’s daily lives, an academic said here on Saturday.
On Thursday,aCambodian Mine Action Center (CMAC)’s bomb expert team safely removed an unexploded U.S. made AN-M66 aerial bomb, weighing 2,000 pounds and containing roughly 1,000 pounds of explosives, from the Chaktomuk riverbed near the Sokha Phnom Penh Hotel opposite to the Royal Palace here in the capital.
Joseph Matthews,asenior professor at the BELTEI International University in Phnom Penh, said Cambodia is still suffering from the United States’ unexploded ordnance and landmines, which are the legacy of the U.S.-Vietnam war 50 years ago.
“Every day, somewhere in Cambodia, poor people are becoming the victims of these unexploded ordnance and landmines,” he told Xinhua. “Many people have lost their lives andasubstantial number of people have been maimed by these unexploded ordnance and landmines.”
Most of the victims are farmers, laborers, and children accidentally stepping on these landmines in fields, forests, and abandoned buildings, he said.
According to the book “Hun Sen: Politics and Power in Khmer History for over 40 Years”, between 1965 and 1973, the U.S. had dropped some 230,516 bombs on 113,716 sites in Cambodia.
In the book, Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun Sen also wrote that the American bombings of Cambodia caused “tens of thousands of civilian casualties because of this vicious undeclared war.”
“I strongly believe that the United States is morally responsible for the suffering of these people and ethically and legally bound to adequately compensate the families of those who had lost their lives or were maimed by these unexploded ordnance and landmines,” Matthews said.
According to Cambodian government figures, from 1979 to 2021, landmines and unexploded ordnance had killed 19,808 people and injured 45,156 others in the Southeast Asian nation.
Meanwhile, the academic also urged the U.S. to respect the territories of other countries and human lives, and not interfere in other countries’ internal affairs under the pretext of democracy and human rights.
“The United States’ double standard of peace, democracy, and human rights are not only creating chaos and turmoil in the world but also destroying peace, democracy, and human rights,” he said.
“The United States’ version of global peace and democracy is based on hypocrisy, deception, and stirring the violence around the world. From the Vietnam War to Iraq and Afghanistan invasions, these actions resulted in nothing but more chaos, instability, and global threat to the peace and security of vulnerable countries,” he added.
Matthews said cold war mentality, unilateralism, protectionism, hegemonism, and zero-sum games can only harm others.
“Countries should coexist peacefully, achieve mutual benefit and win-win results,” he said. ■
(1)Photo taken on May 5, 2022 showsawar-left aerial bomb recovered from the Chaktomuk River in Phnom Penh, capital of Cambodia. (CMAC/Handout via Xinhua)
(2)People take photos ofaMark 82 (Mk 82) bomb lifted out of the Mekong River in Kandal province, Cambodia, May 21, 2015. (Xinhua/Sovannara)
RCEP က ပွင့်လင်းသော ၊ အားလုံးပါဝင်သော ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အခြေပြုသည့် ကုန်သွယ်ရေးစနစ်၏ အကောင်းဆုံး ဥပမာဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား